Mediam-bahoaka · Jolay, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Jolay, 2011
Janoary 2022 33 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Jolay, 2011
Sodàna Atsimo: Hafatra momba ny #LoveFromSudan
Afrika Mainty 22 Jolay 2011
Ny ampitson'ny fahaleovantenan'i Sodàna Atsimo, nanangana vondrona hetsika ny tanora Sodaney izay miezaka hampisy fifanakalozana sy firahalahiana eo amin'ny Atsimo sy Avaratra ary hampifandray amin'ny alalan'ny aterineto ny tanora avy amin'ireo firenena roa ireo. Mo Elzubeir no nifofotra voalohany tamin'ny fampielezana horonantsary, hafatra fandefasam-peo sy Twiter #lovefromsudan, ary navitrika aoka izany tamin'ny fampandrosoana...
Tonizia : herisetran'ny mpitandro ny filaminana hanaparitahana ny mpanao fihetsiketsehana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Jolay 2011
Anankiray amin'ireo lahatsoratra manokana mikasika ny Fanoherana tany Tonizia 2011 ity lahatsoratra ity. Naparitaky ny polisy tamin'ny alalan'ny herisetra ireo mpanao fihetsiketsehana toe anoloan'ny lapam-panjakana tamin'ny 15 jolay lasa teo. Nitaky fanavaozana ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ary nikasa hanao sit-in fahatelo tao Kasbah, ivon'ny fanaovana fihetsiketsehana rehetra ao Tunis renivohitra. Anisan'ny...
Indonezia: nahatezitra ny olona ny fahafatesan'ilay mpiasa an-trano tany Arabia Saodita
Azia Atsinanana 20 Jolay 2011
Naneho ny heviny am-pahavitrihana ireo Indoneziana raha nahare fa notapahan-doha tany Arabia Saodita tamin'ny volana lasa teo i Ruyati, 54 taona, mpiasa mila ravinahitra teratany avy any Java andrefana. Voaheloka ho faty izy satria namono ny mpampiasa azy izay, araka ny filazany, dia nanararaotra azy. Ankoatra ny sazy fanamelohana noraisin'ny fitondrana...
TED Talk avy amin'ny mpiara-manorina ny Global Voices Rtoa Rebecca MacKinnon
Amerika Avaratra 17 Jolay 2011
Niteny ny mpiara-manorina ny Global Voices Rebecca MacKinnon fa tokony hanorina orinasa tompon'andraikitra hahatonga ny aterineto hivelatra mankamin'ny fomban’ “olom-pirenena” ny olo-tsotra. Nandritra ny TED talk tamin'ny 12 Jolay 2011 tany Edinburgh, Ekaosy no namoaboasany fa lasa fantsom-pifandraisana voalohany eo amin'ny olo-tsotra sy ny fitondram-panjakana ny aterineto saingy nampitandremany fa misy ny andian'orinasa...